Xeeladaha sharadka | Express Sports & Makusoo Casino | Deg deg & Access hufan
Xeeladaha sharadka – Keep What you Win with Sports.expresscasino.co.uk
Imisa jeer baad u malaynaysaa dheer 'ciyaaryahan faa'iido' ku haya wanaagsan? Ma aha inta badan dunida ee sports Khamaarka, waxaan idinku leeyahay.
Qaar badan oo naga mid ah waxaa ka mid ah aragtida ah in qof kasta oo khamaar on a guulaha ciyaaraha dhamaadka maalinta inta ay ciyaaro si joogto ah oo muddo dheer ku filan.
Tani ma aha daruuri run.
Waxaynu wada ognahay in ak had iyo jeer ku laayeen in ka badan ciyaartoyda, iyo qaban muhiimka ah ee ciyaaro kaararka. Haddii kaliya waxaa jiray si ay u xitaa ka soo laayeen, inuu u ciyaaro cadaalad ah oo laba jibbaaran; Haddii kaliya ciyaaryahanka sidoo kale lahaa faa'ido kasta hal mar, halka a.
Well, si xiiso ku filan; waxaa jira hab! A wanaagsan oo si fiican loo qorsheeyay istaraatijiyad sharadka ayaa ku siin kara laayeen.
Halkan waxa aad ku arki mid ka mid ah ugu dhinacyo muhiim ah xeeladaha sharadka sare. Waxaan beensheegayaal ahayna ma waxaad ogaan Sida goobaha aasaasiga ah, waayo sare fur lacag xeelado sharadka waxaa loogu talagalay ciyaartoyda aan lagu baabtiisay ganacsiga oo ay leeyihiin waxyaabaha aasaasiga xaqa ay u leeyihiin.
fikradaha caqliga sida qiimaha la filayo (EV)
qiimaha la filayo (EV) waa mid ka mid ah xeeladaha ugu muhiimsan ee Khamaarka ganacsiga. Sidaas darteed la yaab ma laha in ay weli qorshe si joogta ah loo isticmaalo ee Khamaarka goobta.
Aynu ka fiirsan tusaale u ah bu this more fahmaan.
Aynu aad sheegeysid iyo aad ii go'aansato in kulan ka mid ah kubadaha basketing- si fiican u, Waxaan macno ahaan loola jeedaa! Waayo, kubad kasta oo aad dambiil, Anigu waxaan oggolahay inaan aad bixiso $1. Sidoo kale, kubad kasta oo aan dambiil aad ii bixin $1.
Sharad Blog Xeeladaha Will Sii dib markii Table Bonus ee hoos ku
Hadda, waxaan basketballs kartaa waxa muuqato sida daa'in ah oo weli ku guuleystay no. Tani waa sababta oo ah sharciga celceliska dhaco ilaa iyo kasta $1 Waxaan ka dhigi aan aakhirka ku dhow isla markiiba u badiyay. bet waxaa loo arkaa in ay leeyihiin qiimaha dhex-dhexaad ah, kaas oo natiijada dhamaadka yeelan karaan fursad loo siman yahay ee dharbaaxay mid siyaabo
Haddaba si aad ugu darto aragti ka duwan in ay; Aynu niraahno aad ka heli daalay basketing kubadaha iyo dooran inuu ka tago ciyaarta. Hadda, Waxaan dhinaca kale dareemi in lay inching wajahan a guul iyo guul urta. Waxaan bartey u maamulaan si aad u qanciso in uu sii joogo oo uu u ciyaaro dambe ogolaaday in aad bixiso dheeraad ah 50 senti dambiisha aad kubad kasta. Waxaad si kastaba ha ahaatee, eekaan aad istaraatijiyad sharadka iyo sii wadaan in ay ii bixin $1 sida ku heshiiyeen ka hor.
U fiirso sida uu jiro wareeg ah lama filaan ah u qalmay. Waxaa jirta fursad kasta oo laga yaabo in aad $1.50 iyo lumin oo kaliya $1.00 ee soo laabto. Haddaba waa inaad ka faa'iidaysan by 50 senti kasta 1 isku day in aad ku guuleystaan. Tani waxay abuurtaa filasho wanaagsan (+EV) of 50 cents. Si kastaba ha ahaatee, sida mid ka mid ah lacagta iga bixinta, Waxaan aakhirka qaba qiimaha xun filayo (-EV) of 50 cents. Waayo, guul Khamaarka, diiradda waa in si ay u helaan oo ay u bartaan khamaar EV + iyo fogaado -EV lumiya.
Sharad Xeeladaha Blog for Sports.expresscasino.co.uk. Ka dhig Waxa aad ku guuleysato!